नेपाली बजारमा सुनको कोटा बढाउन माग किन ? – Everest Dainik – News from Nepal
नेपाली बजारमा सुनको कोटा बढाउन माग किन ?
काठमाडौं, भदौ १३ । तीज, दशैं, तिहार जस्ता चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा बजारमा सुनको अभाव भएको भन्दै सरकारले दिने गरेको सुनको कोटा बढाउन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्।
हाल बैंकहरू मार्फत देशभर व्यवसायीहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको प्रतिदिन २० किलोग्रामको कोटालाई ३५ किलो पुर्‍याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले ६ महिनाका लागि कोटा बढाउन सिफारिस गरेको तर सरकारले कार्यविधिमै संशोधन नगरी त्यो लागु हुन नसक्ने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ। भदौ महिना लागेसँगै चाडपर्वहरूको मौसम सुरु भएको छ।
तर यही बेलामा धेरै आवश्यक पर्ने सुनका गहना बनाउन बजार जानेहरूले रित्तो हात फर्किनु परेको बताउने गरेका छन। कतिपय सुन व्यवसायीहरूले सुन नभएको भन्दै पसल नै बन्द गरेर बसेका छन्।
तिनै मध्येकी एक रोहीनादेवी शाक्यले भनिन्, ‘सुन अभाव भएकाले मैले नयाँ गहना बनाउनका लागि आउने ग्राहकको काम नलिएर बन्द नै गरिदिएको छु। पुराना गहनाको मर्मत गर्ने काम भने भइरहेको छ।’ सरकारले देशभरका सुन व्यवसायीहरूलाई विभिन्न बैंकहरूबाट दैनिक २० किलो सुन दिँदै आएको छ।
तर माग त्यसको दोब्बर रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कोटा बढाउनका लागि सरकारका विभिन्न निकाय धाउँदा पनि सरकारले निर्णय नगरिदिएको भनाइ छ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको।
‘प्रत्यक दिन २० किलो सुन आएर ४० किलोसम्मको बजारको मागलाई पूरा गर्न सक्दैन। चाँडो भन्दा चाँडो चाडपर्व भन्दा अगाडि नै सरकारले कोटा बढाउने निर्णय गर्‍यो भने मात्रै बजार सहज हुन सघाउ पुग्छ,’ उनले भने ।
सुनको मुल्य घटेकाले व्यक्तिहरूसँग भएको सुन बिक्रीका लागि बजारमा यथेष्ट नआएको अनि विदेशबाट आउने मानिसहरूले ल्याउन पाउने ५० ग्राम सुनमा भन्सार शुल्क तोकिएपछि त्यो सुन पनि बजारमा नआएको बताइएको छ।
सुनको कोटा ६ महिनाका लागि ३० किलो बनाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहे पनि कार्यविधि संशोधन गर्नु पर्ने भएकाले निर्णय हुन नसकेको प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए।
उनले भने, ‘कोटालाई तीस किलोसम्म बनाएर कार्यविधिमा संशोधन गर्दिनका लागि भनेर अनुरोध गरेर पठाएका छौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधिबारे निर्णय गरिसकेको छैन। त्यही प्रक्रियाले नै विद्यमान कोटा बढ्ने नबढ्ने कति बढ्ने टुङगो लाग्ने छ।’
कतिपयले सुनको तस्करीमा गरिएको कडाइ पछि बजारमा वैधानिक कोटाको सुनको माग बढेको बताएका छन्। सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य सुनमा हुने तस्करी रोक्न सरकारले व्यवसायीहरूलाई दिने सुनको कोटा बढाउनु पर्ने बताउँछन्।
सुनको बढ्दो माग पूरा गर्न नसकेमा फेरि सुनको तस्करी बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ। बीबीसी
ट्याग्स: gold, Nepali Market